ယနေ့တိုင် ပဟေဠိအဖြစ်ရှိဆဲ Eastern Air lines ရဲ့ flight no. 980 လေယဉ်ပျက်ကျမှု - hotnewmyanmar.com
ယနေ့တိုင် ပဟေဠိအဖြစ်ရှိဆဲ Eastern Air lines ရဲ့ flight no. 980 လေယဉ်ပျက်ကျမှု
March 27, 2022 May 21, 2022 - by zorrow - LeaveaComment
၁၉၈၅ ခုနှစ်ရဲ့ နယူးရီးယား နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တခုဟာ မလေးရှားရဲ့ MH 370 ကဲ့သို့ ယခုထိ ပဟေဠိ ဆန်နေဆဲမို့ ရှာဖွေတင်ပြလိုက်ပါသည်။
ပါရာဂွေးနိုင်ငံ၊ အပ်ဆမ်ဆင်မြို့၊ဝါးတားဖရန့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ Eastern Air lines ရဲ့ flight no. 980 ဟာ ပျံသန်းထွက်ခွါဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါသည်။
ဟတ်ဆန်အ‌ခြေစိုက် လေယာဉ်အဖွဲ့သားများကို ဦဆောင်သူမှာ ကပ္ပတိန် လာရီကမ်းဘဲလ် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့သားငါးယောက် ပါရှိပါသည်။ ခရီးစဉ်မှာ လူမျိုးစုံပါရှိပါသည်။
ပါရာဂွေး အမေရိကန်အပြင် တောင်ကိုရီးယား အထိစုံလင်စွာပါရှိသော်လဲ ဘိုးရင်း ၇၂၇ အမျိုးအစား လေယာဉ်အတွက်မူ ခရီးသည် ၂၉ ယောက်သာ ပါရှိသည့် အတွက် နေရာလွတ်များစွာရှိနေခဲ့ပါသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း လေယာဉ်အဖွဲ့သားများ ဂရုပြုရမည့်ခရီးသည်တစ်ဦးလဲပါရှိခဲ့ရာ သူမမှာ မာရီယန် ဒေးဗီးစ် ဖြစ်ပြီး ပါရာဂွေးနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်၏ ဇနီးဖြစ်သလို သူမ၏ လုံခြုံရေးမှာ အရေးကြီးပါသည်။
ခရီးစဉ်မှာ ဘိုလီးဗီးယားနှင့် အီကွေဒေါ နိုင်ငံများမှတဆင့် အမေရိက၊ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် မိုင်ယာမီတွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပဟေဠိခရီးစဉ်စတင်ခဲ့ပါပြီ။
၎င်းနေ့ညနေ ၇ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ လေယာဉ်သည် ဘိုလီးဗီယားနိုင်ငံ လါပက်ဇ် မြို့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ထံ ဖလိုက် ၉၈၀ မှဆင်းသက်ခွင့် တောင်းခံလာပါသည်။လေဆိပ်မှလဲ ဆင်းသက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး လေယာဉ်ဆီဖြည့်တင်းနိုင်ကြောင်း အကြောင်း ပြန်ခဲ့ပါသည်။
လာပက်ဇ်လေဆိပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောရလျင် သာမန် လေ့ကျင့်ထားသော ပိုင်းလော့များအတွက် ဆင်းသက်ရ ခက်ခဲသော လေဆိပ်တခုဖြစ်ပါသည်။ El Alto, အမည်ရ ယင်းလေဆိပ်မှာ အံ့သြဖွယ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၃,၃၂၇ ပေမြင့်ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံးလေဆိပ် ဖြစ်ပါသည်။ ရေခဲဖုံးလွှမ်းပြီး အချွန်အတက်ထူပြောလှတဲ့ တောင်တန်းတောင်စွယ်တွေ ပေါများပါသည်။ ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်ရှိသေမင်းတမန်လေဆိပ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ Terrain ခေါ် လေပွေဝဲကတော့များကလဲ ကြောက်စရာကောင်းအောင်ပြင်းထန်ပါသည်။
လေယာဉ်မှူး ကမ်းဘဲလ် နှင်အဖွဲ့အတွက်မူ ၎င်းအခက်အခဲများနှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ပုံမရကြောင်း၎င်းတို့၏ အသံလွှင့်ပြောကြားချက်အရ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။ လေယာဉ်သည် လေဆိပ်နှင့် ၂၅ မိုင်အကွာတွင်ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၁၉၆၀၀ မှစတင်ဆင်းသက်လာပါသည်။
သို့သော် ကံမကောင်းစွာဖြင့် လေယာဉ်သည်လေဆိပ်သို့ဆင်းသက်ခဲ့ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲ အီလီမာနီ တောင်ပေါ်သို့ ပျက်ကျခဲ့ပြီးအပိုင်းအစများ ပြန့်ကြဲသွားပါသည်။ပျက်ကျပြီးမကြာမီအချိန်အတွင်း El Alto လေဆိပ်မှ လေတပ်သို့ အကူအညီအတွက် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝနေသော လေတပ်မှအဖွဲ့သားများ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားသော်လဲ ဆိုးရွားသောရာသီဥတုကြောင့်၎င်း မြင့်မားသောတောင်ထွဋ် တောင်စွယ်များကြောင့်၎င်း ရှာဖွေရခက်ခဲခဲ့ပါသည်။
ရက်ပေါင်များစွာကြာမြင့်ပြီးနောက် တိုးတက်မှုအနဲငယ်သာရှိခဲ့ပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမရှိဟုဆုံးဖြတ်ကာ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရပ်တန့်ခဲ့ကြပါသည်။ ထူးဆန်းစွာပင် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့် လေယာဉ်မှာပါရှိသော ဘလက်ဘောက်စ် ခေါ် Flight Data Recorder မှာလဲ မည်သူမျှ ထုပ်ဖေါ်ပြောဆိုမှုမရှိခဲ့ပါ။
နှစ်အတန်ကြာမှသာ Flight Data Recorder ကိုပြန်လည် ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်း အတွင်း၌လဲ မည်သည့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာမျှ မရှိတော့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။တွေ့ရှိရပုံမှာ
ဆယ်စုနှစ် သုံးခုကျော်ကြာပြီးနောက် ဘော်စတွန်မြို့မှ ဒန်ဖက်ထရလ် နှင့် အိုင်းဇက်စတုန်နာ အမည်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်မှ Wikipidia အတွက် မပြည့်စုံသေး‌သည့် လေယာဉ်မတော်တဆမှုများ အတွက်စာရင်းပြုစုဖို့ ဘိုလီးဗီးယားကိုရောက်ရှိလာပါသည်။
Flight 980 အတွက်လဲ အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ စေ့စပ်သေချာစွာ စူးစမ်းရှာဖွေ မှုကြောင့် Flight 980 ၏အဖြေအချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့သည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦး၏စူးစမ်းရှာဖွေမှုကို “Operation Thonapa ” ဟုအမည်ပေးခဲ့ရာ ၎င်းမှာ ဉာဏ်ပညာနတ်တပါးအမည်ဖြစ်ပါသည်။အစတွင် ဘော်စတွန်ပညာရှင်နှစ်ယောက်မှာမျှော်လင့်ချက် အနဲငယ်သာရှိသော်လဲ ကံတရား၏ဖေးမမှုကို ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
အခြားသူများနှင့် ကွဲပြားစွာ သူတို့သည် တောင်ခြေတဝိုက်ကို အဓိကရှာဖွေကြပါသည်။ လေယာဉ်၏ အမြန်နှုန်း နှင့် အပိုင်းအစများလွင့်စင်နိုင်သည့်နေရာများကိုခန်းမှန်းတွက်ဆ၍ ရှာဖွေကြပါသည်။
Flight Data Recorder မှာ သူ၏အလေးချိန်ကြောင့် တောင်အောက်အထိကျရောက်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရှာဖွေပါသည်။ သူတို့၏ ယူဆချက်မှန်ကန်သဖြင့် အပျက်အဆီးများရှိရာနေရာမှ အောက်ဘက် ပေ ၃၀၀၀ ခန့်တွင် အခြားအပျက်အဆီးတချို့ကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတော့သည်။
တွေ့ရှိသည့်အထဲတွင် မဂ္ဂနက်တစ်တိပ်ခွေ တခုပါဝင်သည်။(ယခင် FDR များသည်မဂ္ဂနက်တစ်တိပ်ပေါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်သည့် အမျိုးအစားရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ဤကားစကားချပ်။)
သို့သော်ကံဆိုးစွာပင် တိပ်ခွေနှင့်FDR box မှာ ဆိုးရွားစွာပျက်ဆီးနေပြီဖြစ်သည်။တိပ်ပေါ်ရှိမှတ်တမ်းကို မဖတ်ရှုနိုင်ပါက ဖလိုက်၉၈၀ ပျက်ကျမှု၏ အဖြစ်မှန်ကိုထာဝစဥ် သိရှိနိုင်မည်မဟုတ်တော့ပေ။
ဘော့စတွန်သားနှစ်ဦးသည် လွယ်လွယ်နှင့်လက်မလျော့ပဲ အခြားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို နှိုင်းယှဥ်ဆက်စပ်၍ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကို မှန်းဆခဲ့ကြသည်။၎င်းတို့၏ ယူဆချက်အရ လေကြောင်းထိန်းမျှော်စင်မှ ဦးတည်ရာကိုလွဲမှားသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟက်ပီးနယူးရီးယားအကြိုည အပျော်လွန်ခဲ့သူများနှင့် ဂျူတီအပြောင်းအလဲတွင် မှားယွင်းမှုရှိခဲ့မည်ဟုယူဆရသည်။ သို့မဟုတ် တမင်သက်သက်မကောင်းကြံစည်၍ လမ်းကြောင်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းလဲဖြစ်နိုင်သည်။
သုတေသီနှစ်ဦး၏ယူဆချက်အရ ‌Eastern air မှမူလက စစ်ဆေးရာတွင် ခရီးသည်များထဲတွင် ရာဇဝတ်မှုခင်းနှင်ပါတ်သက်သူတယောက်မျှမပါချေ။ သို့သော် ခရီးဆောင်အိတ် အပျက်အဆီးများထဲတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိကြရသည်။
ခရီးဆောင်အိတ်တခုလျင် ဒေါ်လာ၂ သန်းခန့်တန်ကြေးရှိသည့် မိကျောင်းအရေခွံများ ကိုထိတ်လန့်ဖွယ် အ‌‌မြောက်အများတွေ့ရှိရလေသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများပိုင်ရှင်မှာ Enrique Matalo’n စီနီယာ ဖြစ်ပြီးကျော်ကြားသည့် မာဖီးယားဂိုဏ်းခေါင်ဆောင်တဦးဖြစ်ပါသည်။ လေယာဉ်တွင်သူနှင်သူ့မိသားစု လိုက်ပါလာသည်ကို သိရှိလိုက်ရပါတော့သည်။
ထို့ပြင် သုတေသီနှစ်ဦတွေ့ရှိခဲ့သည့် ဘလက်ဘောက်စ် မှာလဲ လေယာဉ်၏ တပ်ဆင်ရမည့် စင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော အခွံသက်သက်သာဖြစ်ပြီး တိပ်ခွေနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါချေ။
NTSB ခေါ် National Transportation Safety Board မှ ယင်းတိပ်ခွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရာ တိပ်ခွေတွင် ၁၉၆၅ ခုနှစ်က ကျော်ကြားသော I Spy အမည်ရ စပိန်တီဗွီ စီးရီးဇာတ်လမ်းတိပ်ခွေဖြစ်သည်ကို တုန်လှုပ်စွာတွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့သည်။
သို့ဆိုလျင် မာဖီးယားခေါင်းဆောင်ကို လုပ်ကြံလိုခြင်းလား။သို့တည်းမဟုတ် ကန်သံအမတ်ကတော်ကို လုပ်ကြံလိုခြင်းလား။ မကောင်းသည့် Black Box ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ တမင်တပ်ဆင်ပေးလိုက်သလား။
မည်သို့ဖြစ်စေကာမူ Flight 980 အဖြစ်အပျက်မှာ ပဟေဠိဆန်စွာ ယခုထိအဖြေရှာမရဖြစ်နေဆဲဖြစ်‌နေပါတော့သည်။
Previous Article ကပ္ပလီကျွန်းများမှ ထူးခြားသော မြောက်ပိုင်းကင်းစောင့် ကျွန်းသစ်တော
Next Article ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်တော